China Heli 14-18t Heavy Forklift-seriesG andian-dahatsoratra maivana forklift anatiny (ho an'ny orinasa sy mpamokatra Azia atsimo atsinanana | China Construction
Heli 14-18t Heavy Forklift-andian-dahatsoratraG andian-dahatsoratra maivana forklift anatiny (ho an'i Azia atsimo atsinanana
1. Rafitra angovo: mandray ny herin'ny Dongfeng Cummins 6BTAA5 9-C170, izay mahafeno ny fenitra famoahana National I, dia manana hery matanjaka sy fanoherana ny toetr'andro mahery. Ity motera ity dia mankafy ny fanohanan'ny Cummins rafitra serivisy fiantohana iraisam-pirenena
2. Rafitry ny solika: Ankoatry ny motera misy sivana voalohany dia misy sivana voalohany fanampiny nampiana mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny solika ambany
3. Gearbox: Izy io dia mandray ny boaty fanamafisam-peo mandeha ho azy nohomboana tsy miankina nataon'i Heli, izay azo itokisana, azo antoka ary mora tazonina
4. Ny famaky fiara manokana ho an'ny forklift mavesatra dia noraisina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny asa mitohy ao anatin'ny fepetra miasa mafy
5. Rafitra hydraulic: mandray rafitra italiana orinasa italianina, effciency avo sy fitehirizana angovo
6. Rafitra fanamafisam-peo: azo antoka sy azo itokisana ny rafitra famonoana kapila kapila mampihatra ny teknolojia misy menaka manidina
7. Fitaovana mahery vaika amin'ny rafitry ny vatana: noraisina ny firafitra misy takelaka matanjaka sy famolavolana miendrika boaty, izay mateza kokoa
8. Atsofohy Hood Double ny hood mba hamotsorana tanteraka ny Space internal maintenance
9. Rafitra kodiarana: kodiarana pneumatika 12.00-24 no fanamboarana mahazatra ho an'ny andiany iray manontolo. Mitombo ny fahazoan-dàlana amin'ny kamio, izay manana fahaizana mandalo tsara kokoa. Ny kodiarana aloha sy aoriana ary ny sisiny dia tsy miovaova. Ny masinina iray manontolo dia azo ampiarahina amin'ny toeran'ny fametrahana kodiarana voatokana
Parameteran'ny fampisehoana lehibe
Haavo avo (fenitra)
Ny zoro mitongilana F / R
Halavan'ny ankapobeny (miaraka amin'ny fork)
Ny haavon'ny mast nampidinina
Ahoana no mampitaha ny kalitaon'ny vokatrao amin'ny hafa?
Izahay dia orinasam-panjakana manana laza tsara, ny vokatray rehetra dia kalitao tsara amin'ny vidiny lafo. Ny olana amin'ny serivisy aorian'ny varotra dia azonao atao ny mifandray aminay tsy misy fisalasalana.
METY HETY haharitra hafiriana ny fiantohana ny famokarana antsika?
Ny fe-potoana azo antoka ho an'ireo ampahany lehibe amin'ny milina vaovaontsika dia 12 volana manomboka amin'ny datin'ny famoahana ny volavolan-dalàna fampidinana na ao anatin'ny 1500 ora fiasana, dia miankina amin'izay alehany izay aloha.
Ny pars lehibe dia misy: ny motera, ny paompy hydraulic, ny rafitra fanaraha-maso hydraulic, ny valves rehetra amin'ny hydraulic, ny motera hydraulic, ny pumps hidrolika, ny silinder hydraulic, ny radiator, ny fantsona sy ny fantsona rehetra, ny chassis ary ny shafts, ny rafitra ary ny kofehy mifamatotra haingana, Sns
INONA INDRINDRA NY FENO NY FANOMPOANA ARA-BOLA?
Mandritra ny vanim-potoana azo antoka, ny serivisy fiantohana dia homena raha toa ka toa misy kilema ilay masinina. Hanome ireo ampahany amin'ny fikojakojana ny milina izahay maimaimpoana.
Manolotra fiofanana momba ny injeniera sy fanohanana teknolojia mandritra ny fiainana amin'ny milina koa izahay
Misy koa ny serivisy injeniera any ivelany raha mifanaraka amin'ny roa tonta.
METY HETRA NY FOTOANA FANaterana?
Amin'ny tranga tahiry, ny ora fandefasana dia 7 andro aorian'ny nahazoana ny mizana. Amin'ny tranga tsy tahiry, ny andro fandefasana dia 25 andro
IZA TOETRA fandoavana vola no azontsika ekena?
Raha ny mahazatra dia afaka manaiky fe-potoana T / T na L / C isika.
(1) Amin'ny fe-potoana T / T. 30% amin'ny T / T toy ny fandoavambola, ny fandanjana dia aloa alohan'ny fandefasana.
(2) Amin'ny fe-potoana L / C. Taratasim-bola tsy azo ivalozana eo imasony.
Teo aloha: Heli 34-36t Heavy Forklift-seriesG andiana fandoroana anaty forklift mifandanja
Manaraka: Heli 20-32t Heavy Forklift-seriesG2 andiany anatiny fandoroana forklift
Heli 18ton Adidy mavesatra entin'ny forklift kamiao CPC ...
Heli 5 taonina Forklift-seriesK andiany 7 di ...
Heli 2-3.5t Engine Forklift-seriesG Series maty ...
Heli 14-16t (localized) Heavy Forklift-seriesG ...